တစ်ပါတ်စာ အထူးဟော စာတမ်းဗေဒင် ( 28.9.2020) မှ (4.10.2020 ) ထိ – Let Pan Daily
တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်းစောင့်မျှော်နေကြသူ လေးတွေ တွက် ဆရာအောင်ချစ်မင်း ရဲ့ ( 28.9.2020) မှ (4.10.2020 ) ထိ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာအဟော
တစ်ပါတ်စာ အထူးဟောစာတမ်းဗေဒင်ဆရာက အညံ့တွေမြင်ရင်ပြောပေးမှာပဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်သိရတာပေါ့ သိပ်ညံ့နေတယ်ဆိုလည်းယတြာလေးတွေပြုလုပ်လိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်…..မိတ်ဆွေများ အထူးကံကောင်ကြပါစေ..
သင်၏အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ ပိုင်းဆိုင်မှု့တွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ကောင်းပါသည်။ ပစည်းဥစ္စာတွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူတိုးတက်ပါမည်။ အလုပ်တွင်နံမည်ကောင်းတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မည်။ သင့်အတွက်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တတ်ပါသည်။
ယခုအပတ်အတွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါက အလွန်ကောင်းပါသည်။ အကျိုး မြတ်များစွားရရှိပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။လာဘ်လည်းလွန်ရွှင်နေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိလောက်အောင်ကောင်းနေပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်းကောင်းပါသည်။ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအလွန်ကောင်းပါသည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အပြာရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၉၊၈)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ…. သပြေ(၆)ညွန့်အိမ်ဘုရား လှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာအနည်းငယ်တော့ညံ့နေပါသည်။ အလုပ်အခြေအနေတွေ ဖရိုဖရဲတြွေဖစ်နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အကြံအစည်တွေလည်းလွဲချော်နေတတ်ပါသည်။ သင့်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း မှုန်းဝါနေတတ်ပါသည်။ သင့်စိတ်ကိုသေချာထိမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မည်။
ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အကြီးအကဲကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။ စာရင်းဇယားကိစ္စတွေလည်း ဖြေရှင်းရတတ်ပါသည်။ဒီအချိန်မှာသင့်အနေဖြင့်ငြိမ်းငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကမလုပ္ပါနှင့်။ ရင်နှီးထားတာတွေအားလုံးကုန်သွားပါလိမ့်မည်။
သင်၏ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေကတော့လွဲချော်သွားတတ်ပါသည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးကံမှာ သွေးတိုးသောရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။သတိထားပါ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါက အချစ်ရေးကံမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးစကားများရတတ်သည်။ သင်၏ ကံကောင်းသော အရောင်မှာအစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၄၊၇)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်တွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ….. နှင်းဆီ(၇)ပွင့်အိမ်ဘုရား လှူပြီး မိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။ သင့်အကြံအစည်တွေလည်း အောင်မြင်ပါလိမ့်မည်။ကောင်းပါသည်။ သင်လုပ်ချင်တာတွေလည်းအကောင်ထယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ သင်ဒီအချိန်ဘာလုပ်လုပ်တိုးတက်မှု့တွေရရှိပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါကရာထူးတိုးတက်မည်။ သြော်ဇာအာဏာတွေလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါကကောင်းပါသည်။ အလွန်အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ ကောင်းနေပါသည်။ ငွေလည်းသင့်အတွက်များများဝင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ကျန်းမာရေးမှာ လည်းကောင်းနေပါသည်။ပူပင်စရာမရှိပါ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။အပေးယူမျှတသောအချစ်ရေးဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ရေး ကောင်းပါသည်။အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာကြက်သွေးရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၆၊၈)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ ကံကော်ညွန်(၉)ညွန့်အိမ် ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာအသင့်တင့်တော့ရှိနေပါသည်။ အလုပ်မှာမထင်းမှတ်ပဲ အမှားကြူးလွန်မိတတ်သည်။သတိထားပါ။ အလုပ်ကတောအဆင်ပြေနေပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတွေမှမျှော်မှန်းသည်ထက်ဆုံးရှုံးမှု့တွေဖြစ်တတ်ပါသည်။ဂရုစိုက်ပါ။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့သင့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါသည်။သတိထားပါ။
ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကမကောင်းပါ။ဆုံးရှုံးမူ့တြေကြီးသြားပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ရစရာရှိတာတွေကတော့ပြန်မရ၍စိတ်ညစ်ရတတ်ပါသည်။ သင့်ကျန်းမာရေး မှာမျက်စိကိုက်ခဲသောဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးအနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအိမ်ထောင်ဖက်အတွက်အနည်းငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်သည်။
သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ ရွှေညိုရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၇၊၉)ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ အုန်း(၁၀)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင် မှာ ကောင်းနေပါသည်။ ရတနာပစ္စည်းတွေလည်းဝင် လာတတ်ပါသည်။ အလုပ်မှာလည်းတိုးတက်မှု့များစွာကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ စီးပွါးရေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းလာပါလိမ့်မည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေလည်းတိုးလာပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အလုပ်တွင်ရာထူးတိုးမည်။ အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။
အောက်လက်ငယ်သားရောအထက်လူကြီးပါသင့်ကိုကူညီမှု့တွေပေးပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်ပါက ကောင်းပါတယ် လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးမည်။ သင်၏ ငွေကြေးကံမှာ လည်းကောင်းနေပါတယ် လာဘ်လာဘပေါးများသောအချိန်ဖြစ်ပါတယ် ။
သင်၏ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းနေပါတယ် ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာလည်း ကောင်းနေပါသည်။ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးသုခအပြည့်အဝရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာဆင်စွယ်ရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၁၊၂)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ ငြေထီး(၁၁)လက်အိမ္ဘုရားလွူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
သင်၏ အလုပ်အကိုင်မှာကောင်းနေပါသည်။ ဒီအချိန်မှာသင်စိတ်ဓာတ်မကျဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်အကိုကလည်းအနည်းငယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော့ရှိနေတတ်ပါသည်။ မမျှောလင့်ပဲသင့်အတွက်ပြည့်စုံမှု့တွေလည်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။
စီးပွါးရေးလည်းကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ဝန်ထမ်းများဖြစ်ပါက အခြေနေတွေတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။
အလုပ်နေရာကောင်းတွေလည်းရရှိလာပါလိမ့်မည်။ ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ်စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းပါသည်။လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေကြေးကံမှာလည်းကောင်းနေပါသည်။
သင်ရစရာရှိတာတွေလည်းပြန်လည်ရရှိပါလိမ့်မည်။ ကျန်မာရေးဝမ်းဗိုက်တော့ခဏခဏအောင့်တတ်ပါသည်။စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။
အိမ်ထောင်ရှင်များဖြစ်ပါကအိမ်ထောင်ရေးအိမ်ထောင်ဖက်ခရီးသွားရ၍ခဏတာခွဲခွာရတတ်သည်။ သင်၏ ကံကောင်းသောအရောင်မှာ အနီရောင်ရောင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၂၊၉)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ…. ဇော်စိမ်း(၁၂)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
အလုပ်အကိုင်မှာညံ့နေပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စတွေလွဲချော်နေတတ်ပါသည်။ အလုပ်တွင်လည်းအမြဲလိုလိုပြဿနာတွေဖြေရှင်ရတတ်ပါသည်။ သင့်ရုံကြည်ရသောသူတွေကလည်းသင့်ကိုမကောင်းကြံတတ်သည်။သတိထားပါ။ ဒီအချိန်မှာသင့်အနေဖြင့်လမ်းပျောက်သလိုဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက အလုပ်၌စိတ်အလွန်ရှုပ်နေရတတ်ပါသည်။ ရရှိမည့်အခွင့်အရေးကလည်းလွဲချော်နေတတ်သည်။
ယခုအပတ်တွင်းလုပ်ငန်းသစ် များ စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဆိုပါကလုံးဝမလုပ်ပါနှင့်အရှုံးပေါ်တတ်သည်။ သင်၏ ငွေကြေးကံမှာကောင်းနေပါသည်။ငွေကြေးအာမခံတော့မပေးပါနှင့်ပြဿနာပေါ်တတ်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးကံမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတတ်ပါသည်။သွေးအားနည်းခြင်းရောဂါဖြစ်တတ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်ပါကအချစ်ရေးမှာကောင်းနေသော်လည်းအနည်းငယ်စကားများရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအတိုက်အခံပေါ်အနည်းငယ်ပေါ်လာမည်။ သင်၏ကံကောင်းသောအရောင်မှာနီညိုရောင် ဖြစ်ပါသည် သင်၏ကံကောင်စေသောဂဏာန်းမှာ(၆၊၃)ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအပတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ယတြာ….. ရွက်လှ(၈)ညွန့်အိမ်ဘုရားလှူပြီးမိမိလိုရာဆုတောင်းပါ။
မ်က္ကပ္မွန္ တပ္ခ်င္ သူမ်ား သတိထား ၾကပါေနာ္ ညီမလို မျဖစ္ဖို႔ ေစတနာ နဲ႔ သတိေပး တာပါတဲ့
စီးပြား တက္ခ်င္ရင္ လင္ နဲ႔ မယား ရန္မျဖစ္ၾက ဖို႔လိုတယ္”